Google Advertising Services - AdvertisingMyanmar.com
☎ 09 979 300 900 ★ http://advertisingmyanmar.com ► ad mar ► Google Advertising Services
ဂူဂဲ ကြော်ငြာ လုပ်ငန်း
ဂျီမေးလ်၊ ယူကျု နဲ့ ဂူဂဲ အပါအဝင် ကမ္ဘာအနှံ့က ဝဗ်ဆိုက် ၂ သန်းကျော်မှာ AdWords သုံးပြီး ကြော်ငြာထိုးပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ကိုယ်တိုင်က လစဉ် ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော် အကုန်ခံပြီး Google မှာ ကြော်ငြာထိုး ကြရပါတယ်။ အသေးစိတ် သိချင်ရင် အပေါ်က ပုံကို ထိကြည့်လိုက်ပါ။
Traditional advertising is hard to control and measure. Why would you spend to broadcast, when you can narrowcast or sniper straight to targets? We deploy technology in marketing to do all sorts of work related to all these: • digital goal setting • live, daily, weekly reports • Google Analytics • Google AdWords • Google AdSense • SEM (search engine marketing) • SEO(search engine optimization) • PPC (pay per click) • PPM (pay per mille) • PPA / PPL (pay per action)
လူကြီးမင်းတွင် ကိုယ်ပိုင် wesite တခု ရှိပါသလား ????
လူကြီးမင်း ၏ customer များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက နိုင်ငံတကာတွင် ရှိနေပါလား ????
လူကြီးမင်း၏ website မှ တဆင့် အကုန်အကျသက်သာစွာ customer များ ရှာဖွေ လိုပါသလား ???
ကမ္ဘာပေါ်တွင် website ပေါင်း million နှင့် အထက် ရှိနေပါသည်။ သင်၏ website ကို google ၏ ပထမဆုံးစာမျက်နှာတွင် ကြော်ငြာခြင်းဖြင့် customer များ ရှာဖွေလိုက်ပါ။ Google မှာ ကြော်ငြာခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်း၏ website ကြော်ငြာကို အကြိမ်များစွာ ငွေကြေးကုန်ကျမှုမရှိပဲ ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်း၏ website ကြော်ငြာကို user မှ click နှိပ်ပြီး website ကို လာရောက်ကြည့်ရူမှသာ cost ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။
Google မှာ ကြော်ငြာခြင်းဖြင့်-
လူကြီးမင်း၏ကြော်ငြာကို ကြိမ််ဖန်များစွာ ပြသပေးသောကြောင့် brand awareness ဖြစ်စေပါတယ်
လူကြီးမင်း၏ website ကို လာရောက်ကြည့် ရူ့သူ ပိုတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်
လူကြီးမင်း၏ လုပ်ငန်းအကြောင်းကို ရုပ်ပုံမျာနှင့် သာမက video ဖြင့်ပါ ကြော်ငြာနိုင်ပါတယ်
Competitors website များ ထက် သင်၏ website က customer များနဲ့ အချိတ်အဆက် များစွာ ရရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဘယ်နိုင်ငံက customer တွေလာရောက်ကြည့်ရူတယ်။ website ရဲ့ ဘယ်page ကို ကြည့်ရူသူအများဆုံးလဲ
Website ရဲ ဘယ် content ကို လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှု အရှိဆုံးလဲ ဆိုတာတွေကို အချိန်နဲတပြေးညီ သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
အနည်းဆုံး $100 အသုံးပြုပေးရပါမည် ဝန်ဆောင်ခအနေနှင့်ကတော့ လူကြီးမင်းတို့ အသုံးပြုသော ကြော်ငြာစရိတ်ပေါ်မှုတည်ပြီး အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်လိုပါက ဖုန်း 09 979 300 900 ကိုသာ ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။
With traditional advertising, you are going out and looking for your customers. You are putting advertisements on billboards, on television, and on newspapers. You are trying to make sure that your customers are seeing your ads.
The benefits of advertising online is that you can actually make sure that your customers are finding you, when they are looking for your type of content, your business, or service.
Trust our Google AdWords Advertising Experts
We have run over 20,000,000 Google ads successfully since 2007. Industry leaders trust in us. And so you can.
ကြော်ငြာပေါင်း သန်း ၂၀ ကျော်ထိုးခဲ့ပြီး၊ Google AdWords အတွေ့အကြုံ ၁၁ နှစ်ကျော်ရှိပါတယ်။ မမှားနိုင်တဲ့ ပတ်တနာနဲ့ လက်တွဲလိုက်ပါ။